Nkọwapụta Ọnụ Ahịa PayPal na Akụkọ Ya Banyere Nhazi mentkwụ Onlinegwọ Ntanetị | Martech Zone
Ezie na m a nnukwu ofufe nke Amazon, ihe Amazon Mgbakwunye, na a Prime Riri, Na-amasị m PayPal. Enwere m nnukwu akaụntụ kredit na PayPal, kwụghachi ụgwọ na mmefu, enwere m ike ịtọ ntọala ịkwụ ụgwọ maka PayPal Debit Card - dị mfe maka azụmaahịa ahụ. Naanị taa m nọ na Sweetwater ma chọọ ịzụta ụfọdụ ekweisi ọhụrụ site na PayPal. Eji m obi eziokwu zụta ha site na Sweetwater n'ihi njikọ PayPal Credit ha. (Aga m agbakwunye na ndị na Sweetwater dị ịtụnanya - Enwetara m ekwentị site na onye injinia ahịa e kenyere m mgbe ịzụta ahụ na-ekele m).
PayPal bụ nhọrọ dị egwu maka ecommerce n'ihi na ọ chọghị ka ụlọ ahịa gị dekọọ data data kaadị akwụmụgwọ ọ bụla. Nke ahụ bụ atụmatụ nchekwa mara mma. Aga m agbakwunye na e nwere ezigbo ihu na PayPal, agbanyeghị, na nke ahụ bụ sistemụ ha na-akwụ ụgwọ maka ebubo ebubo. Enwere m onye otu ibe m nke kwụrụ ụgwọ ha, wee maa ya aka, na enweghị ọkwa ọ bụla - PayPal wepụtara ego na akaụntụ ụlọ akụ nke onye ọrụ ahụ. Ihe mechara mee bụ azụ dị egwu n'etiti abụọ ahụ. Ebe ọ bụ na ọ nweghị nkwekọrịta mgbagha, ọ mechara tufuo n'agbanyeghị na enyefechara ọrụ ahụ.
Ekekọrịta Ahịa PayPal
Banyere 2020, PayPal na-achịkwa n'ịntanetị yana ihe karịrị ọkara nke ahịa share. Nke a bụ mmebi nke PayPal na ndị asọmpi ya:
Nhazi ugwo Ọnụ ọgụgụ nke saịtị Market Share
straipu 145,565 18.57%
Paykwụ Squaregwọ Square 18,015 2.30%
Braintree (Nke PayPal) 17,400 2.22%
Ederede Stripe 15,444 1.97%
Ngwọta Vankwụ Vangwọ Vanco 8,977 1.15%
Iwu 6,295 0.80%
Kwenye 4,261 0.49%
Dọwa 3,471 0.44%
Isi Iyi: Datanyze
Back to my point… PayPal abụghị naanị a ugwo ọnụ ụzọ ámá ọzọ, o nwere ya ilekota online. Site na nde ndị ọrụ 200 nde, nde ahịa ahịa 16, na ijeri ijeri 1.7, #PayPal bụ usoro ịkwụ ụgwọ kachasị n'ịntanetị. Enwere obodo PayPal dị egwu ma na-ere naanị site na PayPal ma na-azụta naanị PayPal. Ọ bụrụ na ị bụ saịtị ecommerce, PayPal kwesịrị ịbụ akụkụ nke nhọrọ ịkwụ ụgwọ gị iji rite uru na obodo a.
PayPal bụ usoro mgbanwe nke gbanwe ụwa nke azụmahịa ọrụ ego. Ihe omuma a, Akụkọ Successga nke Ọma nke Usoro Paykwụ Onlinegwọ Kachasị Onlinentanetị, na-eleba anya na otu Paypal mere ụzọ nke ụwa nkwụnye ụgwọ n'ịntanetị na otu o si aga n'ihu na-eto eto.
Nke a bụ ụfọdụ ọnụ ọgụgụ ama ama na PayPal:
Na 1999, a hoputara PayPal otu n’ime afọ iri kacha njọ n’echiche azụmaahịa
PayPal nwere 10% uto kwa afọ ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ na-eto eto 3%
18% nke e-commerce niile na-edozi PayPal
Na CyberMonday nke 2015, Paypal kụrụ ndekọ azụmahịa 450 kwa nkeji
Tags: ecommerceọnụ ọgụgụ ịkwụ ụgwọ n'ịntanetịịkwụ ụgwọ n'ịntanetịugwo uzoịkwụ ụgwọPaypaluru paypalpaypal ọghọmakwụkwọ ozi paypalpaypal ahịa òkèọnụ ọgụgụ paypalọnụ ọgụgụ
Hey, Douglas. Agara m enyocha data ahịa gị ugboro abụọ yana ọ dị ka ị nwetara ya ezighi ezi na ahịa ahịa. M ga-ejikọta ihe oyiyi ahụ ebe a, ị nwere ike ịchọrọ nyocha abụọ: https://imgur.com/a/dZ9AvOj
Daalụ, Alex! You nwere akụ m nwere ike ịkọwa? Ọ na-amasị m ịnye isi iyi maka data dị ka nke a.